လူရှေ့သူရှေ့ ကွန်ဒုံးဝယ်ဖို့ အကြပ်ရိုက်နေပြီလား | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး, ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် လူရှေ့သူရှေ့ ကွန်ဒုံးဝယ်ဖို့ အကြပ်ရိုက်နေပြီလား
မင်းခန့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် ကွန်ဒုံးဝယ်နည်း အတွေ့အကြုံများ
ကျွန်တော်က ‌မင်းခန့်ပါ… အသက်ကတော့ ၂၇ နှစ်ရှိပြီး ဘားမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ သက်တူရွယ်တူ အတူနေချစ်သူကောင်မလေးလဲ ရှိတယ်ဗျ… နှစ်ဦးသဘောတူ အတူနေချစ်သူသက်တမ်းကတော့ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး။ ၃ လလောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ တစ်လမှာ ၄ ကြိမ် ၅ ကြိမ်လောက် ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ အားတဲ့အချိန် ဟိုတယ်မှာတွေ့ပြီး အတူနေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့။ သူနဲ့အတူနေတိုင်း ကျွန်တော်ကပဲ ကွန်ဒုံးသုံးဖြစ်တယ်။
တကယ့်ပြဿနာက ခုမှစမှာ! ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ကွန်ဒုံးဝယ်တိုင်း အခက်အခဲတွေ ကြုံရတာ! ပထမပြဿနာက ကျွန်တော်က အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ စတိုးဆိုင်တွေ စူပါမားကတ်တွေမှာ ကွန်ဒုံးသွားဝယ်ရတာကို မျက်နှာပူပြီး ရှက်တာ… ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်လေ! တခါတလေ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတဲ့သူတွေက ကွန်ဒုံးသွားဝယ်ရင်ကိုပဲ ပြုံးစေ့စေ့နဲ့… တချို့ဆို အိမ်မှာဘာပြဿနာတက်လာလဲမသိ? ကျွန်တော်ကွန်ဒုံးသွားဝယ်ရင်ပဲ ကြာကူလီလို နှာဗူးလို အကြည့်မျိုးနဲ့ ကြည့်ကြသေးတာ! ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်… တချို့ကောင်တာထိုင်တဲ့သူက ခပ်ငယ်ငယ်ကောင်မလေးတွေဆိုတော့ ဝယ်ဖို့ မရဲတာနဲ့ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အခါတွေကလဲ အကြိမ်ကြိမ်…
ဒီတော့ ကြံရတာပေါ့ဗျာ! ကျွန်တော့်ဝမ်းကွဲ ညီလေးကို မုန့်ဖိုးပေးပြီး ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ခိုင်းတာပေါ့… ကြုံလာရတဲ့ ဒုတိယပြဿနာက ဒီကောင်က လူပျိုပေါက်ဆိုတော့ ဂိမ်းဆော့လို့ မအားတဲ့အချိန်က ခပ်များများ! ဒါ့အပြင် ကြာတော့ သူ့ကို မုန့်ဖိုးပေးရတာနဲ့ ကွန်ဒုံးဖိုးနဲ့ မကာမိတော့ဘူး… ဒီတော့ နောက်တစ်နည်း! နည်းနည်းနားနားက စတိုးဆိုင်ပဲ သွားနေရင် ကျွန်တော့်မျက်ခွက်ကြီးကို မှတ်မိမှာစိုးလို့! ဝေးဝေးလံလံနေရာက စတိုးဆိုင်တွေကို ခြေတိုအောင် လျှောက်ပြီး သွားဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးမိတာပေါ့!
အဲ့မှာ တတိယပြဿနာက စတာ… ခုချိန်က အားလုံးလဲ သိတဲ့အတိုင်း ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ အစတုန်းကလို အသွားအလာ ကန့်သက်ထားတာတော့ သိပ်မရှိပေမယ့် ဝေးတဲ့နေရာက ဆိုင်တွေဆိုတော့ ပစ္စည်းပြတ်နေတာနဲ့… ကိုယ်သုံးနေကျ တံဆိပ် နဲ့ လိုချင်တဲ့ ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားကို မရတာနဲ့ ကြာလာတော့ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းတွေ ဖြစ်လာပါလေရော… တစ်နေ့ကျတော့ အဲ့ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ဘော်ဒါ ကျော်ကြီးကို ရင်ဖွင့်မိတယ်ပေါ့ဗျာ… ဒီတော့ ကျော်ကြီးက ဟိတ်ကောင် မင်း ဘယ်ခေတ်မှာနေနေတာလဲ? ဆိုပြီး ဆဲပါလေရော! ခုလို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ပစ္စည်းမှာတာ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ အပြင်မှာ ကွန်ဒုံးရှာဝယ်နေတုန်းလားဆိုပြီး ဒင်းက ပြောသေးတယ်! သူပြောတော့လဲ ဟုတ်သား!
အဲ့တာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ရှာဖွေကြည့်တော့ ကျွန်တော့်သုံးနေကျ လက်စွဲ ကွန်ဒုံးတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်က တိတ်တိတ်ကလေး ဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာတွေကို တန်းတွေ့ရော! ဟန်ကျတယ်ဗျို့! ပေါက်ပန်းလေးဆယ်နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ကျွန်တော်လို အပြင်မှာဝယ်ရမှာ ရှက်တဲ့သူတွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ပစ္စည်းပြတ်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေ၊ ကိုဗစ်ကာလမို့လို့ ကွန်ဒုံးဝယ်ဖို့တစ်ခုတည်းနဲ့ အပြင်မထွက်ချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လူမသိ သူမသိ တိတ်တိတ်ကလေး ကွန်ဒုံးဝယ်လို့ရမယ့်နေရာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်မယ်။
အဲ့နေရာတွေကတော့ Shop.com.mm >>> http://bit.ly/2HgcOyL
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် သုံးနေကျ ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားတွေပါ ကြုံတုန်းပြောပြလိုက်ဦးမယ်! ကျွန်တော်က တခါတလေ ဖီးငုတ်နေတဲ့အချိန်ကျရင် အလွှာခြားလို့ခြားထားမှန်းမသိရတဲ့ MOJO AIR ကွန်ဒုံးကို သုံးတဲ့အခါလဲ ရှိသလို စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲလေးတွေလိုချင်ရင်တော့ အနံ့ပါတဲ့ KISS JUICY MANGO တို့ KISS HOT COFFEE တို့ သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ…
ကဲ… ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လင့်ခ်တွေကနေတဆင့် ကျွန်တော့်အကြိုက် ရနံ့ပါတဲ့ KISS ကွန်ဒုံးတွေနဲ့ ပါးလွှာတဲ့ MOJO ကွန်ဒုံးတွေကို ပါကင်လိုက်ကြိုဝယ်ပြီးပြီဗျို့… ဘော်ဒါတို့လဲ အမြန်ဆုံးသာ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်တွေကနေ တိတ်တိတ်ကလေး ဝယ်ကြပေတော့…